China AT01 Easy Press Vape CBD / THC / Delta 8 Cartridge momba ny menaka mitondra maimaim-poana ary tsy misy vy mavesatra miaraka amin'ny tsiro madio sy orinasa lehibe etona | Vape Alphagreen
AT01 Easy Press Vape CBD / THC / Delta 8 Cartridge menaka mitarika maimaim-poana ary tsy misy vy mavesatra miaraka amin'ny tsiro madio sy etona lehibe
Famaritana fohy: manome AT01 Easy Press Vape CBD / THC / Delta 8 cartridge vape azo alefa izahay. Miaraka amin'ny tsiro madio sy etona lehibe kokoa izy io. Manana ekipa R&D matihanina izahay ary serivisy mialoha-saling, serivisy aorian'ny-saling. Ny vokatray dia miaraka amin'ny tamberina tsara sy avo lenta. Fitsipika iray fa fiainana ny kalitao. Manantena ny hiara-hiasa aminao.
Vidin'ny FOB: US $ 0.78 - 0.88 / Piece
1. Fampidirana ny vokatra ny AT01 CBD / THC Vape Cartridge
Easy press AT01 dia rafitra mitovy amin'ny cartridge AT01 tany am-boalohany, fa ilay fanavaozana raha ampitahaina amin'ny AT01. Satria amin'ny tendrony hafa-Easy Press Cap. Ny cartridges AT01 dia misy cap cap ary misy ilaina ny asa raikitra hanidiana ny tendrony. Ny cartridge AT01 Easy Press dia miaraka amina press cap, ka vonjeo ny asanao sy ny fotoanao. Mety kokoa sy mora kokoa izy io.
Mangarahara na volondavenona amin'ny tendrony ny tendrony. Fa ny loko hafa kosa dia azo ampanjifaina amin'ny MOQ 3.000. Manohana ny fanaovana pirinty logo sy famolavolana fonosana koa izahay.
Ny tena zava-dehibe dia ny cartridge press mora AT01 miaraka amin'ny tahan'ny famoahana. Mikitika moramora fa tsy afaka misokatra indray. Noho izany, tsy manahy ianao ny amin'ny fivoahan'ny menakao sy ny fandanianao azy.
2. Paramèteran'ny vokatra (famaritana) an'ny AT01 CBD / THC Vape Cartridge
4 * 1.0mm / 1.5mm / 2.0mm, haben'ny （
3. Fampisehoana vokatra sy fampiharana ny AT01 CBD / THC Vape Cartridge
——Mora fanindriana, tsindrio ny tanana fa tsy ilay masinina.
4. Antsipirian'ny famokarana ny AT01 CBD / THC Vape Cartridge
① tendrony fitaratra tanteraka, tsy misy plastika. Aza hadino ny mijery ny fahasalamanao
② Tsindrio amin'ny karazany, fa tsy misy famolavolana.
③ Tsy misy poste afovoany metaly mavesatra (Raha te hahalala ny loza mety hitranga amin'ny metaly mavesatra ianao dia vakio azafady ny lahatsoratra etsy ambany), tendrony hafa azo isafidianana.
④ Taham-pifandraisana solika avo lenta, mifanaraka amin'ny menaka matevina.
Printing Fanontana logo manokana sy loko hafa amin'ny tendrony, manaova marika manokana.
Inona avy ireo loza ateraky ny metaly mavesatra ho an'ny olombelona?
Mitandrema amin'ny metaly mavesatra izay mety hiteraka homamiadana
Amin'ny vaovao dia matetika ahitantsika fa ny metaly mavesatra dia mety miteraka fahavoazana amin'ny vatan'olombelona, ​​indrindra ny fahalotoan'ny metaly mavesatra eo amin'ny tontolo iainana, izay mety hahatonga ny olona harary ary mety hiteraka homamiadana mihitsy aza. Ary ny metaly mavesatra dia hita hatraiza hatraiza eo amin'ny fiainana, tsy ny fandotoan'ny tontolo iainana ihany, na ny kosmetika ampiasain'ny vehivavy namana aza dia misy metaly mavesatra. Azo eritreretina fa miafina be ny voka-dratsin'ny vatan'olombelona, ​​tsy mora ny mahita azy, ary misy karazany maro ny metaly mavesatra, ary hafa ihany koa ny fahasimban'ny karazana metaly mavesatra amin'ny vatan'olombelona. Avy eo andao hiaraka amin'ny rehetra hijery ny loza ateraky ny metaly mavesatra
firaka, ny firaka dia iray amin'ireo metaly mavesatra misy poizina indrindra amin'ny fandotoana vy mavesatra. Raha vantany vao miditra ao amin'ny vatan'olombelona izy io, dia hanimba mivantana ny selan'ny ati-dohan'olombelona, ​​hiteraka fihemoran'ny saina, hiteraka fahafatesan'ny ati-doha sy ho an'ireo marary antitra ary mety homamiadana aza. .
Mercury, miditra amin'ny atiny avy hatrany ny fihinana mercuriera, ary avy eo manimba ny fahitana sy ny hozatry ny ati-doha. Ny rano dia misy merkiora. Raha manolo ny rano misy rakotra mercury izy io dia hiteraka fanapoizinana maharitra.
chrome, ny tena mampidi-doza indrindra dia ny miteraka fikorontanana ara-tsaina sy ny hakamoan'ny rantsam-batana.
arsenika, Ity metaly mavesatra ity dia mety hiteraka pigmentation amin'ny hoditra sy ny keratinization tsy mahazatra.
Aldehydes dia mety hiteraka tsy fahatomombanan'ny voina sy ny aretim-po ary ny aretin-kozatra. Ny atahorana lehibe indrindra dia ny tosidra.
kobalta mety hiteraka fahasimbana amin'ny radioaktifa amin'ny hoditra.
Vanadium, izay misy fiatraikany amin'ny fon'ny olombelona sy ny havokavony, dia mety hiteraka metabolisma plasma tsy mahazatra.
antimony, toy ny kobalta, dia misy fahasimbana amin'ny radio amin'ny hoditra.
sélénium, ireo olona matavy loatra amin'ny selenium dia mijaly amin'ny aretina manaitra.
Thallium mety hiteraka neuropathie marobe.
Manganese mety hisy fiantraikany amin'ny asan'ny tiroid, ary mora ny mahazo hyperthyroidism.
firapotsy, toy ny firaka, dia misy poizina be ary mety hiteraka homamiadana.
Mino aho fa ny olon-drehetra dia manana fahatakarana ny amin'ny loza ateraky ny metaly maro be. Ny metaly mavesatra dia manimba ny vatan'olombelona. Ny tena manimba indrindra dia ny mety hiteraka homamiadana ary hanohintohina ain'olona mivantana. Noho izany, tsy maintsy miteraka fandotoana be eo amin'ny fiainantsika isika, indrindra ny fandotoana vy mavesatra amin'ny tontolo iainana, izay mety hiteraka fidiran'ny metaly mavesatra ireo amin'ny tany sy rano. Rehefa sendra mifandray amin'ireto rano sy tany maloto ireto ny olona dia hiteraka fanapoizinana maharitra izany, izay hiteraka olana eo amin'ny vatana. Mandrahona olona ny aretina.
Teo aloha: AIR Button Activation Adjustable Voltage Palm Battery with 510 Thread, Suit for Universal CBD / THC / Delta 8 510 Cartridge
Manaraka: AT01 Vape CBD / THC / Delta 8 Cartridge, tsy misy firaka vy mavesatra maimaim-poana amin'ny tsiro madio sy etona lehibe
cdd vape cartridge
cartridge vita amin'ny seramika
cartridge vape foana
cartridge menaka cbd refillable
© Copyright - 2010-2021: Voatahiry ny Zo rehetra. Vokatra asongadina, Sitemap, Bateria 510, penina vape bateria, penina vape azo, penina vape azo averina, cbd vape pen, vape menaka cbd azo ampiasaina, Vokatra rehetra